लघुकथा – कुर्सी | Himal Times
Home सिर्जना लघुकथा – कुर्सी
कुर्सीको अावश्यकता परेकोले पसलमा गएँ । मलाई वेतको सानो कुर्सी मनपर्यो । कुर्सी आँगनमा बसेर घाम ताप्न सजिलो र चिटिक्क परेको थियो । पसलेले मसित पैसा लिंदै “कुर्सी लिन भोलि अाउनू भन्यो । मैले कुर्सीमा बसेर बिहान आँगनमा घाम तापेको, चिया पिउदै अखबार पढेको दृश्यहरू उत्तिखेरै देख्न थालें ।
आँगनमा एउटा समारोह चलिरहेको थियो । नियाँलेर हेरें । एउटा भलाद्मी नेता झैं देखिने मान्छे सबैसँग हात जोडेर केही भन्दै थिए । उसको हाउभाउ देख्दा भोट मागेको जस्तो देखिन्थ्यो । अझ उदेकलाग्दो कुरा त ती भलाद्मी त्यही सानो वेतको कुर्सीमा बसेका थिए ।
अलिक पर एकजना कालो कोट लगाएका भद्र पुरुष केही भन्दैथे । कालो कोट लगाउने न्यायाधीश नै रहेछन् । उनी आफ्नो मनको निष्कर्ष सुनाएर झगडा मिलाउने कार्यमा तल्लीन थिए । सबैले ” जडभरत ” नाम गरेका व्यक्तिलाई त्यहाँ पाता फर्काएर उभ्याइएका थिए । कालो कोटवाला पनि मैले हिजो भर्खरै किनेको कुर्सीमा बसेका थिए ।
नजिकै झट्ट हेर्दा भलाद्मी मानिस जस्तै देखिने अर्का एकजना देखिए । ऊ पनि मेरै वेतको कुर्सीमा बसेका थिए । बडो महापण्डित झैं देखिन्थे । कुरा कोशी – काली लगायत नदीनालाको आयो , फेरि असमान सन्धिहरूको , नक्सा हिमाल , अरूण तेस्रो आदिको कुराहरू उठाउँदै थिए । ” सबै प्रपंच मेरै सृजना हो ” भन्दै थिए । ” अनि तौल मार्ने पनि मै , टेबुलमुनिबाट काम गर्ने पनि मै ! ” भन्दै थिए । उनले छानिएका भेडाहरूलाई एउटै चरनमा चराउने कुरा गर्दैथे । क्षण भरमा माहोल तात्यो । उपस्थित भलाद्मीहरुले एकअर्कामाथि कुर्सीले हानाहान गर्नथाले।
म झसङ्ग भएँ । नजीकैको स्कुलमा झुस्स दाह्रीवाला मास्टरको रूपमा म पाठ घोकाउँदै थिएँ , ” बाबु हो “क” माने कलम बुझ्यौ !” । मैले काँधमा झोला भिरेर कुर्सीमाथि उभिएको थिएँ । ” बाह्रखरीमा कतिवटा अक्षर हुन्छन् भन त देशका कर्णधारहरू हो ? जान्नेले उत्तर दिए नजान्नेले एकअर्कालाई कोट्याउन शुरुगरे।
मैले त्यही कक्षामा तीनवर्षदेखि बस्दै अाएका चारजना छात्रहरुलाई सोधेँ , नानी हो तिमीहरु भविष्यमा के बन्छौ भन त ? तिनीहरुले एकै स्वरमा भने , ” सर हामी नेता बन्छौं।”
मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, ” केटा हो ! तिमीहरु भोलि मन्द दिमाग , फाटेका कपडा र जुत्ता लगाएर अाफ्नो लक्षमा पुग्नेछौ अनि फर्कदा सुटबुट लगाएर कारमा चढेर फर्कने छौ। त्यतिबेला तिमीलाई सबैले चिन्छन् तर तिमीले कसैलाई चिन्दैनौं।”
Previous articleआमा छोरी मृत अवस्थामा फेला
Next articleपत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी नियन्त्रणमा